Cnc mitsangana Lathe Machine
Double Column mitsangana Lathe
Manual mitsangana Lathe Machine
Mitsangana Nanova sy fikitroha Lathe Machine
Flera Station Transfer Machine
Horisontell Transfer Machine
Mitsangana Ary marindrano Transfer Machine
Mitsangana Transfer Machine
Ny Mill Grinder
-mitoto vary Wheel
Eny, tena afaka manome antontan-taratasy ao anatin'izany ny taona, ISO9001, Certificates ny An
alysis / Conformance; Insurance; Origin, sy ny antontan-taratasy fanondranana izay ilaina.
Isika sy mizara ny ISO9001 AK certifciation.
Manao ahoana ny tsara?
Avy amin'ny famolavolana ny alalan 'ny famokarana, Aqua-teknolojia Quality rafitra fitantanana dia tafiditra tany amin'ny faritra ny raharaham-barotra. Real-time fanadihadiana sy ny fanaraha-maso atao manerana ny dingana famokarana, miantoka ny vokatra 'toetra tanteraka. Aqua-teknolojia tsara indrindra dia eken'ny maro certifications sy ny accreditations avy amin'ny tena ny talen-.
Ahoana ny momba ny Machine Service?
Ny mpanjifa asa hanara-maso ny didinao manokana amin'ny fototra isaky ny dingana eo amin'ny orinasa mpamokatra entana, sy ny fitaovana fanodinana. Noho ny fanapariahana foibe, rafitra vaovao sy ny dingan'ny hilefitra foana fampandrosoana sy ny famokarana, dia manatsara fitarihana sy ny fotoana fanaterana noho ny vokatra.
Ny Loading seranan-tsambo: Xiamen seranan-tsambo. Na ny hafa China seranan-tsambo araka ny requirements.The nitarika ny fotoana matetika dia 20-60 andro aorian'ny fandraisana ny fametrahana fandoavam-bola. Tanjona manokana milina dia ho midinika. Ny fitarihana mahomby fotoana lasa, rehefa (1) no nandray ny petra-bola, ary (2) manana ny fankatoavana farany ho an'ny vokatra. Raha ny firaka fotoana tsy miasa amin'ny fetra farany, masìna ianao, mba hita ny fepetra takiana amin'ny fivarotana. Amin'ny toe-javatra rehetra, Hiezaka isika mba handraisana ny zavatra ilaina. Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra isika dia afaka manao izany.
Raha mihaino anareo sy ho mandrakariva azo jerena ao amin'ny sehatra rehetra ao amin'ny tetikasa, ny varotra sy ny fanampiana ara-teknika ekipa manoro hevitra anao, ary hametraka ny tena ilaina vidiny.
Ary atsofony nipaipaika Machine, Floor Spring Glass Door Machine, Collet Clamping, Double Tsanganana Cnc mitsangana Lathe, Bench Drilling Tapping Machine,